Shiinaha Nitrile Gloves warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. ASN
Sii gacmaha lakab kale oo difaac ah oo gacmo gashi ah oo loo yaqaan 'Nitrile Gloves' oo aan budo lahayn. Gacmo gashiyada la tuuri karo waxay bixiyaan xoog lagu kalsoonaan karo iyo degganaansho raaxo leh oo ku habboon wax kasta oo ka yimaada diyaarinta cuntada iyo shaqada baabuurta illaa warshadaha, nadaafadda, ama codsiyada fayadhowrka.
Nooca budo, budo bilaash ah
Midab Caddaan, Buluug, sida la codsaday
Cabir S, M, L, XL, Cabbirka celceliska
Shahaadada CE, FDA, ISO
Codsiga Isbitaalka, warshadaha cuntada, Sheybaarka, iwm.
Dekedda Qingdao, Shanghai, Ningbo, Lianyungang, iwm
Maxaad ugu baahan tahay galoofyada Nitrile ee la tuuro?
Galoofyada nitrile-fasalka 1.Industrial-waxay bixiyaan dabacsanaan fiican, iska caabbida daloolka, iyo iska caabbinta kiimikada. Nitrile wuxuu bixiyaa heer raaxo leh oo la tartamaya tan latex.
Gacmo gashiyada la tuuri karo ee ka caaggan caatada ah ayaa ku habboon kuwa xasaasiyadda ku leh cinjirka cinjirka ah ee cinjirka ah. Waxaa lagu heli karaa cabirro dhexdhexaad ah, oo waaweyn.
1.Fudud in la gashado, laastikad wanaagsan oo ur la'aan.
2. Jilicsanaanta waxay siisaa raaxo ka sarreysa iyo ku habboonaanta dabiiciga ah.
3. Wuxuu ku habboon yahay labada gacanba, mid ballaadhan oo la tuuri karo.
4. Ma jiro haraaga kiimikada.
Q1. Maxay yihiin siyaabaha wax loo xirxiro?
J: Caadi ahaan, waxaan alaabooyinka ku xirxirnaa 10-lammaane halkii bacaha, 100 lammaane ama 200 lammaane halkii kartoon macmal ah Dabcan, waad kala-habeyn kartaa habka wax loo xirxirayo.
Q4. Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada?
Q5. Ma ku diyaarin kartaa wax soo saar iyada oo loo eegayo shaybaarrada?
J: Haa, waxaan haynaa 100% tijaabo kahor dhalmada.
J: Waxaan haynaa tayo wanaagsan iyo qiimo tartan si loo hubiyo in macaamiisheena ay ka faa'iideystaan; oo waxaan u ixtiraameynaa macmiil kasta sida saaxiibkeen oo waxaan si daacad ah u ganacsi iyo saaxiibno la leenahay iyaga.
Hore: Gacan-gashiyada PVC
Xiga: Anti-coronavirus (COVID-19) Maaskarada wajiga ee wajiga qalliinka loogu talagalay ee Medical & Disposable 3ply